Iindaba-Inkqubo yoNyango lwaManzi yeNqaba yokupholisa
Kwiinkampani zeshishini ezisebenzisa inqaba yokupholisa indawo yayo, uhlobo oluthile lwenkqubo yokunyanga amanzi kwinqaba yokupholisa ihlala iyimfuneko ukuqinisekisa inkqubo efanelekileyo kunye nobomi beenkonzo ezinde. Ukuba amanzi enqaba okupholisa ashiywe enganyangeki, ukukhula kwendalo, ukungcola, ukubola kunye nomhlwa kunokunciphisa ukuveliswa kwezityalo, kubangele ixesha lokuyeka izityalo, kwaye lifune ukutshintshwa kwezixhobo ezibizayo phantsi kwendlela.
Inkqubo yokunyanga amanzi kwinqaba yokupholisa lilungiselelo lobuchwephesha obususa ukungcola okwenzakalisayo kwindawo yakho yokupholisa amanzi kwinqaba, ukujikeleza kwamanzi, kunye / okanye ukubetha. Uqwalaselo oluthile lwenkqubo yakho luya kuxhomekeka kwizinto ezininzi, kubandakanya:
•uhlobo lwenqaba yokupholisa (ukujikeleza okuvulekileyo, ukugqitha, okanye iluphu evaliweyo)
•umgangatho wamanzi okutya
•ukuveliswa okucetyiswayo iimfuno zomgangatho wenqaba yokupholisa kunye nezixhobo
•ikhemistri / ukwakheka kwamanzi ajikelezayo
•iimfuno zolawulo zokukhutshwa
•nokuba uza kuqhushumba-phantsi uya kuphathwa ukuze usetyenziswe kwakhona kwinqaba yokupholisa
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, izinto ezichanekileyo zenkqubo yokunyanga amanzi kwinqaba yokupholisa zixhomekeke kumgangatho wamanzi okutya kunye nekhemistri yokujikeleza kwamanzi ngokunxulumene nomgangatho wamanzi afunekayo kwinqaba ethile yokupholisa kunye nezixhobo ezinxulumene noko. (Ngokwezindululo zomenzi), kodwa ngokubanzi, inkqubo yokunyanga amanzi kwinqaba yokupholisa ibandakanya uhlobo oluthile:
•ukuhluza kunye / okanye ukuhluza okungafunekiyo
•ion exchange / ukuthamba
Kuxhomekeke kubumdaka obukhoyo emanzini, nakuphi na ukudityaniswa kolu nyango kunokulungela ngokufanelekileyo isibonelelo kwaye kwenziwe inkqubo yonyango, ke ngoko kubalulekile ukuba ubonane nengcali yonyango lwamanzi ukuze kuqinisekiswe ngenkqubo efanelekileyo yenqaba ethile ethathelwa ingqalelo. Kuxhomekeke kwiimfuno zenqaba yokupholisa kunye nenkqubo, ezi zinto zisemgangathweni zihlala zanele. Nangona kunjalo, ukuba inqaba ifuna inkqubo ebonelela ngokwezifiso ngakumbi, kunokubakho izinto ezithile okanye itekhnoloji oya kuyidinga ukuyongeza.
Inkqubo yokunyanga amanzi kwinqaba yokupholisa inokwenziwa ngobuchwephesha obuyimfuneko ukulawula inqanaba:
•i-alkalinity: iya kuxela ubungakanani be calcium calcium carbonate
•iikloridi: inokubangela ukubola kwizinyithi; amanqanaba ahlukeneyo aya kunyamezeleka ngokusekwe kwizixhobo zokupholisa inqaba kunye nezixhobo
•Ubulukhuni: inegalelo kwisikali kwinqaba yokupholisa nakubananisi bokufudumeza ubushushu
•isinyithi: Xa idityaniswe ne-phosphate, i-iron iyakwenza izixhobo ezingcolileyo
•izinto eziphilayo: ikhuthaza ukukhula kwe-microorganism, enokubangela ukungcola, ukubola kunye neminye imiba yenkqubo
•I-silica: yaziwa ngokubangela iidiphozithi ezinzima zesikali 硬 水垢
•I-sulfates: njenge-chloride, inokubangela ukubola kakhulu kwizinyithi
•Izinto eziqinileyo ezichithakeleyo (TDS): inegalelo ekukhuleni, ekwenzeni amagwebu, kunye / okanye kumhlwa
•iitotali eziqinileyo ezixhonyiweyo (TSS): Izinto ezinganyibilikiyo ezinganyibiliki ezinokubangela ukwanda, iifilimu ze-bio, kunye / okanye umhlwa
Iinkqubo zonyango ezithile ziyahluka ngokuxhomekeka kwiimfuno zenqaba yokupholisa kunye nomgangatho / ikhemistri yesondlo kunye nokuhamba kwamanzi, kodwa inkqubo yokunyanga amanzi kwinqaba yokupholisa iya kubandakanya la manyathelo alandelayo:
Ukupholisa inqaba yokwenza amanzi
Amanzi ombuso, okanye amanzi atshintshe opha kwaye aphume amanzi kwaye avuza amanzi avela kwinqaba yokupholisa, kuqala kuthathwe kumthombo wayo, anokuba ngamanzi aluhlaza, amanzi asezidolophini, amanzi amdaka asezidolophini, amanzi amdaka asesitshinini, okanye amanzi omnye umthombo wamanzi angaphezulu.
Kuxhomekeke kumgangatho wala manzi, unokufuna okanye awusayi kufuna unyango apha. Ukuba inkqubo yokucoca amanzi iyafuneka kule nxalenye yenkqubo yokupholisa amanzi kwinqaba, ihlala itekhnoloji isusa ubulukhuni kunye ne-silica okanye izinzise kwaye ilungelelanise i-PH.
Kule nqanaba lenkqubo, unyango olululo lwenza ukuba imijikelezo yokwenyuka kolwandle inciphise kwaye kunciphise inqanaba lokuphuma kwegazi emanzini ukukhupha ngaphaya kwento enokwenziwa ngeekhemikhali zodwa.
Ukucoca kunye nokukhanya-ukuhluza
Isinyathelo esilandelayo ngokubanzi siqhuba amanzi okupholisa kwinqaba ngokusebenzisa uhlobo oluthile lokucoca ukususa naziphi na iincinci ezinqunyanyisiweyo ezifana ne-sediment, i-turbidity, kunye neentlobo ezithile zezinto eziphilayo. Kuhlala kuluncedo ukwenza oku kwangethuba kwinkqubo, njengoko ukususwa kwezinto eziqinileyo ezinqumlisiweyo ezinokunyuka kunganceda ukukhusela inwebu kunye neon ion resins ekungcoleni kamva kwinkqubo yangaphambi kokunyanga. Kuxhomekeka kuhlobo lokuhluza olusetyenzisiweyo, amasuntswana amisiweyo anokususwa ezantsi kwemicron enye.
Ion exchange / ukuthambisa kwamanzi
Ukuba kukho ubunzima obukhulu kumthombo / kumanzi okwenza amanzi, kunokubakho unyango lokususa ubunzima. Endaweni yekalika, i-resin ethambileyo ingasetyenziswa; Inkqubo yokutshintshiselana nge-asidi eyomeleleyo, apho i-resin ihlawuliswa nge-ionon ye-sodium, kwaye njengoko ubunzima buphuma, bunobumbano obuphezulu be-calcium, i-magnesium, kunye nentsimbi ukuze ibambe loo molekyuli kwaye ikhulule imolekyuli yesodium emanzini. Ezi zinto zingcolisayo, ukuba zikhona, ziya kuthi ngenye indlela zibangele iidipozithi kunye nomhlwa.
Okwangoku kule nkqubo, kukho ukusetyenziswa kweekhemikhali ezinje:
•umhlwa inhibitors (umzekelo, ii-bicarbonates) ukunciphisa ubumuncu kunye nokukhusela izinto zentsimbi
•algaecides kunye ne-biocide (umzekelo, i-bromine) ukunciphisa ukukhula kwee-microbes kunye ne-biofilms
•isikali inhibitors (umzekelo, i-phosphoric acid) ukuthintela ukungcoliseka ekuyileni iidipozithi
Unyango olupheleleyo ngaphambi kweli nqanaba lunokunceda ukunciphisa isixa seekhemikhali ezifunekayo zokunyanga amanzi ngeli nqanaba lenkqubo, efanelekileyo ngokujonga uninzi lonyango lweekhemikhali lunokubiza.
Ukucocwa komjelo osecaleni
Ukuba amanzi enqaba yokupholisa aza kusasazwa kwakhona kuyo yonke le nkqubo, iyunithi yokuhluza esecaleni iya kuba luncedo ekususeni nasiphi na isichaphazeli esinengxaki esingene ngokungcoliseka kokukhukuliseka, ukuvuza, njl. Umgaqo olungileyo wesithupha kukuba, ukuba Inkqubo yokupholisa amanzi kwinqaba yokupholisa ifuna ukuhluza ecaleni, malunga ne-10% yamanzi ajikelezayo aya kucoca. Ngokwesiqhelo iqulathe umgangatho wokucoca ulwelo kwimultimedia.
Inxalenye yokugqibela yonyango efunekayo yokupholisa amanzi enqaba kukudilika okanye ukopha kwinqaba.
Kuxhomekeka ekubeni amanzi apholisayo kufuneka ajikeleze amanzi angakanani kwindawo epholileyo, izityalo ziya kukhetha ukuphinda zisetyenziswe kwakhona kwaye ziphinde zifumane amanzi ngohlobo oluthile lonyango lwasemva kwexesha ngohlobo lwe-reverse osmosis okanye ukutshintshiselana nge-ion, ngakumbi kwiindawo apho kunokuthi kunqabe khona amanzi. Oku kuvumela ukuba inkunkuma engamanzi kunye neqinileyo igcinwe kwaye isuswe ngelixa amanzi acociweyo enokubuyiselwa kwinqaba kwaye iphinde isetyenziswe.
Ukuba amanzi avela kuqhushumbe afuna ukukhutshwa, nakuphi na ukukhutshwa kwale nkqubo kuyakudinga ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zolawulo. Kwiindawo ezithile apho kunqabile khona amanzi, kunokubakho imali enkulu yokuxhuma umjelo ophantsi komhlaba ohambisa amanzi amdaka, kwaye iinkqubo zedemineralization zinokuba sisisombululo esineendleko apha, njengoko zinokunceda ukunciphisa iindleko zokudibana namanzi kunye neendlela zelindle. Kwakhona, ukukhutshwa kwenqaba yokupholisa ukopha kufuneka kuhlangane nemimiselo yokukhutshwa kukamasipala wengingqi ukuba amanzi amdaka abuyiselwa kwindalo esingqongileyo okanye kwimisebenzi yonyango yoluntu.
Iinqaba zokupholisa kwimizi mveliso zingabasebenzisi bamanzi abakhulu. Ngokunqongophala kwamanzi kwiindawo ezithile zehlabathi, unyango olusebenzayo lwamanzi oluvumela ukwanda kokusetyenziswa kwakhona kwamanzi yinto eqhuba nefuthe lokuba uzisebenzisa nini kwaye phi iinqaba zokupholisa. Ukongeza, iimfuno ezingqongqo zombuso, zikarhulumente nezikamasipala zokukhupha amanzi ziya kukhuthaza iindlela ezizezinye ezinxulumene nonyango lwamanzi okupholisa kwinqaba.
Inkqubo zokupholisa ezivaliweyo ezithi zinciphise ukungena kwamanzi ngaphezulu kwe-90.0% xa kuthelekiswa neenkqubo zokupholisa ezikhoyo kwimizi-mveliso yamachiza nakwizityalo zamandla obushushu. Yiyo loo nto ikhokelela kwimfuno ekhulayo yeenkqubo zesekethe ezivaliweyo zeenkqubo zokupholisa kwihlabathi liphela.